Kordhi Socodka Blog adoo nooleynaya Qoraalo Hore oo Blog ah | Martech Zone
Jimco, Juun 10, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
In kasta oo aan ku dhowyahay 2,000 oo qoraal oo blog ah Martech Zone, Micnaheedu ma aha in dhammaan shaqadii adkayd ee aan ku shubay qoraal kasta la aqoonsaday. Dad yar ayaa ogaada, laakiin waa is suurtogal ah in dib loo soo nooleeyo qoraalladii hore ee baloogyada lana helo taraafikada cusub.
Usbuucaan badeecad cusub ayaa soo gashay suuqa taas oo ah mid cajiib ah oo dib loogu soo nooleynayo qoraallo hore. (Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa bogagga internetka, sidoo kale, dabcan). SEOPivot waxay falanqeeyaan boggaga boggaaga waxayna ku siinayaan talooyin aad ku dabaqi karto ereyada muhiimka ah ee meelaynta mashiinka raadinta. Waa wax soo saar aad u cajiiba oo aan ugu isticmaalay boggeyga.
Waayo, $ 12.39, waxaad isticmaali kartaa SEOPivot muddo 1 maalin ah - in ka badan waqti ku filan oo aad ku soo gasho illaa 100 xayndaab oo aad u hesho liis dhammaystiran oo ka kooban illaa 1,000 bog iyo ereyada muhiimka ah iyo weedhaha. Natiijooyinka xitaa waad kala soo bixi kartaa adoo adeegsanaya xaashiyaha 'Excel Spreadsheet'!
Waxaan si fudud ugu kala xulay liistada Url iyo Average mugga… taasi waa qiyaas qiyaas ah oo raadinta eray bixin ama oraah ah. Kadib waxaan tafatiray mid kasta oo ka mid ah bogagga ama qoraalada, waxaan ku daray iskuduwaha ereyga muhiimka ah meeshii ay suurogal tahay, dibna ayaan u daabacay qoraallada Way fududahay oo saamayn weyn ayaad ku yeelan kartaa taraafikada.
Waa badeecad aad u fiican oo hab fiican u soo nooleynaya waxyaabo hore oo aad xoog ku gelisay inaad halkaas dhigto!
Tags: 3ruqso.netmaalin walbanatiijooyinka ganacsigajoornaalka raadinta joornaalkaxeeladaha suuqgeynta twitterxeeladaha twitter
Jul 11, 2009 markay ahayd 10:08 AM
Waxaan eegay sheygan sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inaad ka heli karto aragti guud oo ku saabsan waxqabadka websaydhkaaga adoo adeegsanaya falanqeyn oo iibsan kara dib-u-habeynta cilmi-baaristaada muhiimka ah ee ku saabsan aaladda ereyada adwords ee saxda ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in badeecadani ay ku habboon tahay milkiilaha blog kaas oo kaliya doonaya inuu ballaariyo liiska ereyga muhiimka ah isla markaana uusan haysan waqti uu ku sameeyo KPI wuxuu soo tebiyaa cilmi-baarista ereyga muhiimka ah.
Jul 11, 2009 markay tahay 5:12 PM
Waan ku raacsanahay re: falanqaynta erayga, Shout… Adwords is great. SEOPivot walaasheed walaasheed SEMRush aad ayey faa'iido u leedahay sidoo kale - qaasatan mugga hoose, keywords key-tail. Adwords aad uma faa iido badan marka loo eego mugga hoose, mararka qaarkoodna ereyada ku habboonaanta badan.
Waad fahantay qodobkeyga muhiimka ah - si aad si fudud ugu wanaajiso qoraalo hore oo aad uhesho koror wanaagsan oo taraafikada ah, soo degsashada warbixinta SEOPivot waa deg deg iyo fudeyd!
Jul 29, 2009 markay tahay 2:53 PM
Aad baad ugu mahadsantahay dib u eegista! Waan ku faraxsanahay inaan aragno in qalabkeenu uu faa'iido u leeyahay takhasusleyaasha 🙂 Sii wadi doona horumarinta adeegga waxaanan rajeynaynaa inuu xitaa noqon doono mid ku habboon oo waxtar leh.
Nov 16, 2009 saacadu markay tahay 5:01 PM
Farriin weyn. Miyaad jeclaan laheyd haddii aan ku qoro maqaal yar boggeyga kordhinta barta internetka ee ku saabsan tan?
Bloggeygu wali waa cusub yahay sidaa darteed marwalba waxaan raadinayaa inaan ka helo waxyaabo tayo sare leh.
Akhristayaashayda waxaan hubaa inay si weyn uga faa'iideysan doonaan macluumaadkan. Dabcan waxaan dib ugu laaban doonaa bartan
maadaama ay tahay barta asalka ah ee aan xogta ka helo.
Febraayo 18, 2017 saacadu markay tahay 5: 45 AM
Boostada weyn Douglas. Iyada oo ay ku socoto isbeddelka hadda ee dib-u-sameynta waxa ku jira waxaad xaqiiqdii ka horreysay qallooca iyada oo la tixgelinayo inaad qortay qoraalkan ku dhowaad 7 sano ka hor. Waxaan u arkaa ahrefs inay ugu fiican yihiin dhammaan hal xal maalmahan baaritaanka ereyga muhiimka ah.
Febraayo 18, 2017 saacadu markay tahay 11: 18 AM
Xaqiiqdii. Uma arko wax qiimo u leh dhagaystayaasheena inay ku hayaan qoraallo duug ah, oo aan sax ahayn oo goobta ku jira. Waxaan isku dayaa inaan sii hayo inta aan awoodo. Ma aanan maqlin wax aan ka ahayn waxyaabo waaweyn oo ku saabsan ahrefs!